China mpempe akwụkwọ Metal ụlọ ọrụ na-emepụta | Ebute ụzọ
Anyị omenala mpempe akwụkwọ ọrụ na-enye a na-eri-irè na na-ina ngwọta maka gị n'ichepụta mkpa. Anyị nwere oke ọsọ, ọkaibe akụrụngwa akụrụngwa nke kachasị mma maka imepụta ihe na-adịgide adịgide, akụkụ ngwongwo eji eme ihe ugboro ugboro.
Mpempe akwụkwọ Metal ationgha
Omenala anyi mpempe akwụkwọ ọrụ na-enye a na-eri-irè na na-ina ngwọta maka gị n'ichepụta mkpa. Anyị nwere oke ọsọ, ọkaibe akụrụngwa igwe eji arụ ọrụ nke kachasị mma maka imepụta ihe na-adịgide adịgide, ihe eji eme ihe eji eme ihe na njedebe, mgbatị dị elu na ngwakọta ngwakọ na-arụpụta na nkọwa gị.
Mpempe akwụkwọ metal bụ usoro ọrụ igwe nke na-etolite ngwaahịa ọhụrụ site na ụdị mpempe akwụkwọ dị iche iche. A na - eji usoro kpo oku eme ka ihe sie ike ma ọ bụ mee ka mpempe akwụkwọ dị nro site na kpo oku ma ọ bụ mee ka ọ dị jụụ ruo mgbe ọ ruru ogo siri ike chọrọ, yana ya na ọ dị n'ụdị na-arụ ọrụ. Enwere ike iji ọtụtụ usoro dị mkpa na usoro ọgwụgwọ ọkụ, gụnyere mgbakwunye, quenching, ike mmiri ozuzo na iwe iwe.
Otú Mpempe akwụkwọ Metal si arụ ọrụ
Enwere uzo ato nke 3 na usoro ihe eji eme akwukwo, ha nile nwere ike mezue ha di iche iche.
● Ihe iwepụ: N'oge a ogbo, na raw workpiece na-ebipụ ndị chọrọ udi. E nwere ọtụtụ ụdị nke ngwaọrụ na nhazi usoro nke nwere ike wepu igwe site na ihe ọrụ ya.
● Ihe deformation (akpụ): A na-ehulata ma ọ bụ mepụta mpempe akwụkwọ mpempe akwụkwọ n'ime ụdị 3D na-ewepụghị ihe ọ bụla. Enwere ọtụtụ usoro nwere ike ịkpụzi ihe eji arụ ọrụ.
● Gbakọta: Emechara ngwaahịa nwere ike kpọkọta si ọtụtụ esichara workpieces.
● Ọtụtụ ụlọ ọrụ na-enyekwa ọrụ mmecha. Usoro mmecha na-adịkarị mkpa tupu ngwaahịa ngwaahịa mpempe akwụkwọ dị njikere maka ahịa.
Ngwa maka Mpempe Akwụkwọ
Mkpokọta - Mpempe akwụkwọ na-enye ụzọ dị oke ọnụ iji mepụta ogwe ngwaọrụ ngwaahịa, igbe na ikpe maka ọtụtụ ngwa. Anyị na-ewu ogige nke ụdị niile, gụnyere rackmounts, "U" na "L", yana consoles na consoles.
Chassis - A na-ejikarị chassis anyị na-echepụta iji na-achịkwa njikwa electromechanical, site na obere ngwaọrụ aka na nnukwu ngwá ọrụ nyocha ụlọ ọrụ. A na-ewu chassis niile dị oke mkpa iji hụ na nhazi usoro oghere dị n'akụkụ dị iche iche.
Ihe nkwado - na-ewuli brackets omenala na mpempe akwụkwọ mpempe akwụkwọ dị iche iche, dabara adaba maka ngwa dị larịị ma ọ bụ mgbe ọ dị mkpa ogo dị elu nke mmebi emebi. Enwere ike wulite ngwaike na ngwa niile achọrọ.
Laser ọnwụ, Plasma ọnwụ, Waterjet ọnwụ, CNC punching, CNC ekwe, ịgbado ọkụ, gbakọta, wdg
Aluminom, Ígwè, Igwe anaghị agba nchara, ọla, ọla kọpa
Anodized, sandblasted, polished, ntụ ntụ ntekwasa, electroplated, wdg
Nnyocha ihe 1e, In-Process, Final
Focuslọ ọrụ na-elekwasị anya
Ọrụ ugbo, ụgbọala, akụrụngwa, ngwá electronic, ahụike, arịa ụlọ, ngwaike, igwe, wdg
CNC igwe, CNC agbanye, Ogwe igwe, Mpempe akwụkwọ metal, Emecha, wdg
Nke gara aga: Ogwe igwe
Osote: Akụkụ Titanium